Akron, OH • Fanosorana vatana sy fanorana NuRu
Aza adino ny mamandrika ny vatanao manosotra anb nuru fanorana any Akron, OH.
Akron no tanàna lehibe indrindra fahadimy ao amin'ny fanjakan'i Etazonia any Etazonia ary izy no sezon'ny distrikan'i Summit County. Any amin'ny sisiny andrefana amin'ny lemaka Allegheny Glaciated no misy azy, 30 km eo ho eo atsimon'i Cleveland. Aza adino ny fotoana famandrihana anao manosotra ny vatana ary fanorana nuru any Akron, OH.
Fotoana tsara indrindra hitsidihana Jona-Sept.